Ufakelo FSX / Xplane sur HDD dans un yoqwalaselo SSD inqqalelo
umbuzo Ufakelo FSX / Xplane sur HDD dans un yoqwalaselo SSD inqqalelo
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #126 by gerod
Ndiza kushintshintsha utshintsho lwam ukucwangcisa kwaye ndijonge ukuthatha un template nge-SSD 256 Hamba kunye ne-HDD 1. J'ai lu unombolo ethile yezihloko kwiinkqubo ze-FSX / XPlane kwiinkqubo kunye ne-2 DD kunye ne-non-rassuré. I-Sachant que le temps de chargement du simulateur ayiyiyona nto inomngcipheko kum, uthele ngokucacileyo ngokuqinisekileyo ukuba unomsebenzi wokuqeshisa i-FPS ne-FPS ayiyi-au-impact impact i-préférerais tout mettre sur le HDD ( Un ailleurs le SSD yayiza kuhamba ngokukhawuleza kunye nee-scènes Orbx). Olu khetho lungenzeka kwaye ngaphantsi kweemeko? UFaudra unomsebenzi omkhulu kwi-bidouillages informatique i-susceptibles de sources?
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #128 by Gh0stRider203
Mholo ngalentsasa. Ngoku ekuthumeleni kwi IsiNgesi Forum kuphela. Ungafumana i Forum French, apha:
(Translation nge google ngoko ukuba kuphosakele ukuba ukusola kwabo)
Ixesha ukwenza page: 0.147 imizuzwana